Gambia oo ka baxday ururka barwaaqasooranka - BBC News Somali
Gambia oo ka baxday ururka barwaaqasooranka
Image caption Khariidada: Dalka Gambia
Madaxweynaha dalka Gambia Yahya Jammeh ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu go'aansaday in uu ka baxo ururka barwaaqosooranka ee Commonwealth oo ilaa 48 sano ay xubin ka ahayd, sababtana waxay ku sheegeen in ururka u yahay mid u taagan isticmaarkii hore.
Dalka Gambia ee Afrikada Galbeed waxa uu ka mid ahaa 54-ka xubnood ee ururkaasi barwaaqosooranka oo uu hoggaamiyo dalkan Ingiriiska, una badan dalalkii hore u ahaan jirey mustacmaraadkii boqortooyada Ingiriiska, waxana ururka Commomwealth la asaasay sannadkii 1931.
Go'aanka madaxweynaha Gambia oo laga shaaciyey telifishannada dalkaasi, laguma sheegin faahfaahin kale oo ku saabsan sababaha Gambia uga baxday ururka, marka laga reebo inay sheegtay in aanay doonayn in ay ka sii mid ahaato urur u taagan guumeysigi hore.
Hasse ahaatee laba sano ka hor ayaa madaxweyne Yahya Jammeh uu ku eedeeyey Ingiriisku inay gacan siinayaan mucaaradka isaga ka soo horjeeda.
Dawladda Ingiriisku waxay sheegtay inay ka xun tahay go'aanka haatan ay gaadhay Gambia ee ay kaga baxada ururka Commonwealth.
Sannadkan horraantiisiina, warbixin ka soo baxday xafiiska arrimaha debadda ee Ingriiska ayaa Gambia aad ugu dhaleexcaysay heerka dharitaanka xuquuqda banii'aadamka oo la sheegay inay aad ugu liitaan. Kalhorena, hey'adda Amnesty International waxa aad u durtay xuuqul-Insaanka dalka Gambia, oo ay ka mid tahay dilkii sagaal maxaabiis ah.
Madaxweyne Yahya Jammeh waxa uu inqilaab milateri ku qabsaday Gambia sannaddii 1994.